Sida laga soo xigtay markhaati ka socda Epic Apple wuxuu leeyahay 78% faa'iido uu ku leeyahay App Store | Waxaan ka socdaa mac
Farsamo yaqaan maaliyadeed ayaa markhaati ka noqon doona dacwadda Apple ee ka dhanka ah Ciyaaraha Epic. Oo waxay u socotaa inay muujiso in Apple uu leeyahay faa'iido ku dhow 80% qaybtaada App Store. Waxay sheegaysaa in shirkadda Cupertino ay macaashkeedu ahaa 78% sannadka 2019, iyo 75% sannadka 2018.
Isagoo tixgelinaya inuu isagu yahay markhaati uu soo bandhigay Epic GamesLambarradan waa in lagu qaataa toobiyeyaal, laakiin runta ayaa ah in cidina shaki ka qabin in dukaanka codsiyada Apple uu ganacsi weyn u yahay shirkadda.
Qof kastaa wuu ogyahay in qaybinta app Store Apple waa mid ka mid ah ganacsiyada ugu macaashka badan shirkadda. Waxaa jira malaayiin iyo malaayiin soo dejin ah oo ah codsiyo dhinac saddexaad ah, halkaas oo Apple ay ku qaaddo guddi wax ku ool ah iibsi kasta oo ay isticmaalayaashu adeegsadaan.
Bloomberg kaliya dhajiyay a warbixinta halkaas oo uu ku sharaxayo in tijaabada Apple ee ka dhanka ah Epic Games ee bilaaban doonta isbuuca soo socda, markhaati ay soo bandhigtay Fornite uu sharxi doono faa'iidooyinka ay Apple ka hesho App Store-keeda.
Bakhaarka Ned, Khabiir farsamo yaqaan farsamo yaqaan ah oo ay shaqaaleeyeen Epic Games, ayaa ku sharixi doona tijaabada in Apple ay macaash ku heshay App Store oo 75% ah 2018 iyo 78% sanadka 2019. Sida iska cad, Apple waxay isku dayi doontaa inay muujiso in tirooyinkan aysan run ahayn, iyo buufiyay Barnes.
Qiyaas aan lagu kalsoonaan karin
Runtii uma maleynayo in Barnes uu xisaabin karo faa'iidada noocaas ah. Haa, waad garan kartaa inta shirkaddu ku kasbato wax ku iibsiga lagu sameeyay dukaankeeda dalabka, tan iyo markii tirada soo dejinta iyo farqiga komishanka ee mid kasta oo ka mid ah. Laakiin macquul uma aha farsamayaqaanku inuu qiyaaso kharashka ku baxaya dayactirka bakhaarkan oo kale.
Adeegyo badan ayaa looga baahan yahay meeraha oo dhan si ay u martigeliyaan codsiyada si loo soo dejiyo, oo lagu daro halyeeyada horumarineed ee farsamo ee Apple ay ku leedahay shaqaalaheeda kormeera, tijaabiya oo xakameeya waxyaabaha lagu bixiyo App Store. Laakiin waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida Apple dib ugu celinayo markhaatigaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sida laga soo xigtay markhaatiga ciyaaraha Epic, Apple wuxuu leeyahay faa'iido dhan 78% App Store
Hubaal Waan saxay Mahadsanid!
Jawaab Toni Cortes